I-China Hydrogen Refueling Station fektri kanye nabakhiqizi | Isicebi
Sizinikele ebhizinisini lesiteshi se-H2 esisebenzisa amafutha abusa kusukela ngonyaka ka-2010, sinikezela ngesiteshi esipheka umoya we-H2, esisebenza ku-450 bar, sinomthamo we-500kg / ngosuku. Kungasiza iklayenti ukuthi libone kungakapheli isonto eli-1 ukusuka kokufakwa kokusebenza Sivele sinikeze isiteshi sokukhulisa i-H2 Korea, Korea nase-Europe.
I inzuzo yomkhiqizo
1. Uhlelo Lokuhanjiswa Kwegesi: Uhlelo lokusatshalaliswa kwegesi luhambisa igesi i-hydrogen, okusuka ekukhiqizweni kwe-hydrogen okwenziwa isiza nge-tube trailer.
2. Uhlelo lokucindezela: IHydrogen icindezelwa ngedivaysi yokunyusa, imvamisa kuzingcindezi ezingaphezu kwe-400 bar / 850 bar.
3. Uhlelo Lokugcina: Lolu hlelo lugcina i-hydrogen ephezulu kakhulu kusuka ohlelweni lokuncindezela. Umehluko wokucindezela phakathi kohlelo lokugcina kanye nezinto ezifakwayo i-hydrogen okwandisa amandla kusiza i-hydrogen refueling.
4. Uhlelo lokuvuselela amandla: I-Hydrogen ifakwa ezinqoleni noma kwezinye izakhiwo ngalolu hlelo futhi ingafakwa kumitha.
5. Isistimu Yokulawula Nokuvikelwa: Lolu hlelo luhlanganisa lonke uhlelo lokucindezela nokukhulisa, kanye nokuvuza, ilangabi, ukuvikelwa komlilo, ukuvikelwa kombani, ukuvikela i-static kanye nokunye ukuxwayisa nokuvikelwa kwangaphambi kwesikhathi, ukuqinisekisa ukuphepha kohlelo lonke.
Isisetshenziswa se-hydrogen refueling senzelwe ukuxazulula inkinga yesikhashana ye-hydrogen refueling noma i-hydrogen refueling.
isiteshi se-hydrogen eselula eselula
skid esiteshini se-hydrogen refueling skid
Esedlule: I-LO2/ LN2/ LAr ​​ithangi lokugcina igesi lezimboni
Olandelayo: Isitoreji se-hydrogen
Izikhungo Zokugcwalisa ze-H2
Isiteshi Semoto Ye-Hydrogen
Izikhungo Zokushaja ze-Hydrogen
IHydrogen Fuel Cell Refueling
Izikhungo ze-Hydrogen Fuel
Izikhungo zegesi ze-Hydrogen
Isiteshi Sokumpompa KweHydrogen
Izikhungo Zokusiza Zama-Hydrogen
Isikhulisi Esigudlisiwe seHydrogen Skid